विद्यार्थी संख्या २६ – Radio Hatemalo FM
प्रकाशित मितिः ३० फाल्गुन २०७४, बुधबार ०१:०४ March 14, 2018 हातेमालो संवाददाता
नेपालगन्ज–बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका वडा नं. ५ कम्दीस्थित नानापुरक्षेत्रका विद्यार्थीले निजी विद्यालय रोजेपछि सामुदायीक विद्यालय सञ्चालनमा कठिनाई भएको छ ।
विद्यालयको सेवा क्षेत्रका विद्यार्थी जति निजी बोडिङमा गएपछि जनकल्याण नेराप्रावि नानापुरले विद्यार्थीनै पाउन छोडेको छ । कक्षा ५ सम्म सञ्चालनमा रहेको यो विद्यालयमा चालु शैक्षिक सत्रमा जम्मा २६ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । त्यसमा पनि नियमित विद्यालय आउनेको संख्या आधामात्रै रहेको छ ।
वितेको एकदशकमा विद्यार्थी संख्या ह्वात्तै घटेको प्रधानाध्यापक शंकर सिंहले बताए । ‘गाउँमा हुनेखाने सबैका बालबालिका बोडिङ स्कूलमा जान्छन् ।’–प्रधानाध्यापक सिंहले भने–‘गरीव, वेरोजगारहरुले मात्रै सरकारी स्कूलमा बालबालिका पठाउने गरेका छन् ।’
१० वर्ष अघिसम्म यो विद्यालयमा १ सय ५० बढि विद्यार्थी रहेको विद्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । गाउँमै निजी विद्यालय सञ्चालनमा आएपछि विद्यार्थी तानातान भएको हो । विद्यालयको तथ्यांक अनुसार अहिले यो विद्यालयमा कक्षा १ मा सबैभन्दा धेरै ८ जना, २ मा ६ जना, कक्षा ३ र ४ मा ३÷३ जना र कक्षा ५ मा ६ जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् ।
तीनजना शिक्षकले नियमित रुपमा विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । विद्यार्थी संख्या बढाउन सेवा क्षेत्रमा भर्ना अभियान लगायतका गतिविधि सञ्चालन गरेपनि अभिभावकको रोजाईनै बोडिड्ड भएका कारण विद्यार्थी पाउन कठिनाई भएको प्रधानाध्यापक सिंहको भनाई रहेको छ । यो वडामा निजी विद्यालयमा भने विद्यार्थीको कमी छैन । ४ वटा बोडिङ स्कूल सञ्चालन भएकोमा यो वर्ष थप एक बोर्डिङ स्कूल थपिएको छ ।
विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढाउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि सफल हुन नसकेको डुडुवा गाउँपालिका वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष परशुराम बुढाथोकीले जानकारी दिए। बालबालिकालाई बोर्डिङ स्कूलमा मात्रै पढाउनुपर्छ भन्ने वडावासीको गलत मान्यताका कारण सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी घटेको उनको बुझाई छ ।
आगामी शैक्षिकसत्रमा विद्यार्थी संख्या बढाउन मेहनत गर्ने वडा कार्यालय र विद्यालयको योजना रहेको छ । फेरि पनि विद्यार्थी थपिएनन् भने विद्यालयलाई अन्यत्रै गाभ्ने सोंच बनाएको वडाअध्यक्ष बुढाथोकीले बताए ।
स्वीट्जरल्यान्ड दूतावासले भन्यो : नेपालमा कुनै एजेण्ट छैन (विज्ञप्तीसहित)
बाँकेमा ९ जना कोरोना संक्रमित थपिए
खजुराकाे ई गाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सुभारम्भ
राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी विजयी